Ngwunye nke na-eme ka mgbatị mgbatị Cam Cam-HLQ sụgharịrị usoro mgbatị siri ike
Home / ngwa / Mgbakasị na-esi ike / itinye n'ọkwa Igwe Igwe Cam
Category: Mgbakasị na-esi ike Tags: zụta igwe na-agba ume, isi ike, harden agba agba, harden fasteners itinye n'ọkwa, hardening pin itinye n'ọkwa, harden ígwè cam, NA-eme ka obi sie gị ike, NA igwe obi tara mmiri, N'IME ihu n'ala, mmechi mmebi, induction harshaing camshaft, itinye n'ọkwa crankshafts, machinegba ụgwọ igwe na-akwụ ụgwọ ọkụ, ntinye igwe na-agbasi ike Cam
Ebumnuche: Ọkụ na-eme ka ike gwụ perimeta nke ¼ ”nnukwu ígwè cam mgbakọ
Ihe: ¼ ”nnukwu ígwè cam mgbakọ nke dị iche iche geometries
Okpomọkụ: 1650 ºF (900 ° C)
Ugboro ugboro: 177 kHz
DW-UHF-10kW induction usoro oku, nke nwere ụlọ ọkụ dịpụrụ adịpụ nke nwere otu 1.0 containingF capacitor na ntinye ọkụ ọkụ na -emepụta ma mepụtara maka ngwa a
A na-eji eriri igwe na-agbanwe agbanwe na-ekpo ọkụ cams. Oge ọkụ na-adị iche na sekọnd 120-150. Mgbe kpo oku, a na-eme ka akụkụ ahụ dị na mmiri gwụ.
Mgbakasị na-esi ike oghere cam dị n'elu na-arụpụta ihe nsonaazụ na:
• edo kpo oku maka edo pụta
• enwere ike iji otu eriri maka ọtụtụ jiometrị
• nsonaazụ na-agbanwe agbanwe site n'otu ibe gaa na ibe
E nwere ọtụtụ puku ihe ịga nke ọma nke ukwuu igwe na-eme ka igwe na-agba ume nke na-emepụta ọtụtụ nde akụkụ enyere akụkụ dị iche iche nke ụlọ ọrụ. Otu n'ime ihe ndị na - eme ka ekwesi ike (IH) bụ akụkụ ndị dị ka camshafts, crankshafts, gears, sprockets, osisi nnyefe, bọọlụ bọọlụ, atụdo, racks toot, wheel spindles, bear race, fasteners, works tool, track shoes for earth- igwe na - ebugharị - ndepụta ahụ enweghị njedebe. Dị ka ihe atụ, ọnụ ọgụgụ na-egosi obere usoro nke geometries ndị a na-eme ka oge na-agba ume.
Ntughari ígwè na-esi ike
Induction harden Jaw ezé Carbon steel